एक विराट र विनम्र कवि - Nigranitimes
होमपेज / मुख्य खबर / एक विराट र विनम्र कवि
मङ्गलबार, भदौ ३०, २०७७ , निगरानी टाइम्स
नेपाली साहित्यमा कवि बैरागी काइँलाको स्थान ठीक त्यही हो जुन स्थान अङ्ग्रेजी साहित्यमा कलरिजको छ वा टीएस एलियटको छ । त्यसो भनेपछि हामीमा नकारात्मक स्वर एकदम चुँ गर्न थालिहाल्छ किनभने हाम्रो मनोविज्ञानमा श्रद्धाभन्दा सन्देह ज्यादा भूमिकामा छ ।
नेपाली कविताको एक टाकुरा बैरागी काइँला यही हप्ता पद्म श्री सम्मानबाट सम्मानित भए । काइँलामाथि इटहरी बसेर काव्य साधना गरिरहेका कवि मनु मन्जिल लेख्छन ।
’यहाँको वातावरणको निम्ति
(बैरागी काइँलाः मातेको मान्छेको भाषण…….
त्यसो भनेपछि हामीमा नकारात्मक स्वर एकदम चुँ गर्न थालिहाल्छ किनभने हाम्रो मनोविज्ञानमा श्रद्धाभन्दा सन्देह ज्यादा भूमिकामा छ । कलरिज र एलियट दार्शनिक सिद्धान्त दिएर नवीन कविताले आफ्नो दर्शन पुष्टि गर्ने क्षमताका विख्यात कविहरू हुन् । जसरी नेपाली साहित्यमा आफ्नो दर्शन ’तेस्रो आयाम’लाई बेजोड कविताहरू लेखेर पुष्टि गर्ने क्षमताका कवि बैरागी काइला हुन् । यी तीनवटै कविहरूले नदीजस्ता लामा(लामा र घुमाउरा कविताहरू लेखे । पूर्वीय र पश्चिमेली आद्य(बिम्बहरूको उपयोग गरे । अलग, थोरै, तर जाग्रत स्वप्नमा लेखे । प्रयोग गरे । र, आ(आफ्ना धरातलमा विख्यात भए ।
हामीले निक्कै वर्ष काइँला दाइको संगत गर्न भ्यायौं । गद्यकविताको एउटा ’पोएट लरिएट’ को कविता वा विचार सुन्नु, अझ उहाँलाई अगाडि राखेर कविता सुनाउन पाउनु, विमर्शमा सहभागी हुन पाउनु हामी र प्रतिभाशाली कवि भाइ(बहिनीको पुस्ताको लागि समेत एउटा अहम्को विषय हो किनभने कवितालाई नै एउटा भाषा दिएका, साठीको दशकतिरै हलचलसहित आएका, काव्यिक प्रयोगमा सबभन्दा सफल ठानिएका काइँलाका स्तरका कवि सधैं हुँदैनन् ।
हामीले राम्ररी हेर्यौ भने आजै कैयन देशमा एउटा मेजर स्टाटसको कविको स्थान रिक्त छ । कविता एउटा ’मोनोटोनी’ मा गएर, दिक्दारलाग्दो अवस्थामा छ । जवकि छन्द कविताका लरिएट माधवप्रसाद घिमिरे, गद्य(कविताका लरिएट बैरागी काइँलालाई साक्षी राखेर हामी भने नयाँ(नयाँ सिर्जनामा सक्रिय रहन पाएका छौं ।
मैले कवि काइँलाको चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि, श्रद्धेय आईबीसर र वल्लभ दाइसँगको उहाँको संगत, ’फूल, पात, पतकर’को प्रकाशन, उहाँहरूले प्रक्षेपण गर्नुभएको दार्शनिक दृष्टिकोण आदि बारेमा ज्यादा बकबक गरेँ भने त्यो अब दिक्दारलाग्दो ’रिपिटिसन’ मात्रै होला । तर उहाँहरूको ’मान्छेको जन्म महान् जन्म हो, जटिलताको विरुद्ध बाँचिदिने’ भन्ने उक्ति मलाई अरू हजारपटक ’रिपिटिसन’ गर्ने मन छ ।
त्यो किनभने आज हरेकजसो मानिस बौद्धिक छ । हरेक बैद्धिक मानिसमा विद्रोह छ किनभने उसले बाँच्ने जिन्दगी सामाजिक परिवेशको जटिलतामा छ । प्रोफेसर अभि सुवेदी भन्नुहुन्छ ( काइँलालाई बुझ्न विद्रोहीको समस्या र उसको यात्रा बुझनुपर्छ । मलाई लाग्छ ( सरकारले, शासन गरिआएका मानिसले, समाजले बुझ्न नचाहेको कुरै त्यही हो । यो हाँकसहित ’मान्छेको जन्म महान् जन्म हो’ भनेर सिद्ध गर्न यात्रामा निस्केको कवि चाखलाग्दो हुनु स्वाभाविक हो ।
तर त्योभन्दा बढी उहाँहरूले खेल नै यसरी खेल्नुभयो कि मैदान आफैं नै आकर्षक र महान् बनिदियो । कवि भूपि शेरचनले समेत एक वार्तामा आफूलाई मनपर्ने समकालीन कवि को हो भन्दा ’बैरागी काइँला’ भनेका छन् । विद्रोह र हाँकसहित आएको कविले हाम्रोजस्तो साहित्यिक वातावरणमा त्यो प्रतिष्ठा पाउनु साधारण होइन ।
(कविता एउटा ’मोनोटोनी’ मा गएर, दिक्दारलाग्दो अवस्थामा छ । जबकि छन्द कविताका लरिएट माधवप्रसाद घिमिरे, गद्य(कविताका लरिएट बैरागी काइँलालाई साक्षी राखेर हामी भने नयाँनयाँ सिर्जनामा सक्रिय रहन पाएका छौं ।
‘काइँलाले कति नै लेखे र ?’ भनेर पान चपाउनेहरू पनि छन् । खासमा तिनलाई कविको प्रकृत्ति नै थाहा छैन । लेख्नै त सय ( दुई सय किताब लेख्ने पनि छन् तर तिनमा लोभलाग्दो कुनै कुरा छैन । धेरै लेख्नेले थोरै राम्रो लेख्छ । थोरै लेख्ने प्रतिभाले धेरै राम्रो लेख्छ । बाँकी भनेको आफ्नै कोठामा किताबको कुन्यु बनाउने खेलको लागि काम लाग्ने हो । महाकवि देवकोटाले ’मुनामदनबाहेक मेरा सबै कृति जलाइदिनू’ भन्नुको सार यही थियो ।
प्रकृतिमा कविताको जन्म ज्वालामुखीसित मिल्छ । आँधीसित मिल्छ । मान्छेको झोँक र चरम करुणासित मिल्छ । गाउँघरतिर धामी चढेको भन्छन्( प्रकम्पन र स्वप्नील मन्त्रहरूको प्रवाह । त्यो सित मिल्छ । कागजमा ’महान् कविता’ शीर्षक राखेर झ्यालछेउ ओथारो बस्तैमा कविताको जन्म हुने होइन । नत्र ता ’मातेको मान्छेको भाषणः मध्यरातको सडकसित’, ’हाट भर्ने मानिस’, ’गंगा नीलो बग्छु’, ’प्लान्चेटको टेबल’, ’पर्वत’, ’सावातको बैला उत्सव’, ’भोको अजिंगर’जस्ता अभूतपूर्व कविता लेख्ने बैरागी काइँलालाई कविता लेख्न सुझाउन के दरकार ?
तर मलाई लाग्छ काइँलाको अनार्किज्म अर्कै हो । ’आयाम’ लाई दार्जिलिङतिरै घचेटेर पठाउन खोज्ने केही बौद्धिकहरूले भाले भएर निकालेको शब्द थियो त्यो । उनीहरू काँल्दाइको कविताको सामथ्र्य बुझ्थे । आयाम कम बुझे पनि त्यसको शक्ति उनीहरूले बुझेका थिए । तर नेपाली साहित्यको मेनस्ट्रिममा पस्नबाट तिनलाई कसरी रोक्ने ?
के भनेर रोक्ने ? आफूले जानेको भाषाको अन्तिम शब्द उनीहरूले त्यही भेटे ( अनार्किज्म । र त्यसलाई ठूलो संघर्षले उठेको देशको एउटामात्र लिम्बू कविको अर्को नाम बनाइदिए ।
पछिल्लो कालमा आएर कवि काइँलाको प्रभाव जाडोको घामझै फैलिएको छ । कविता लेखेरै ठुलो प्रतिष्ठा आर्जन गरेका, लोकतन्त्रका संग्रामहरूमा लेखक( कलाकारको मोर्चाको नेतृत्व नै गरेका, विचारले, लेखनले मानिसको मुक्तिका लागि जीवनभर सक्रिय कविबाट प्रेरणा लिनेको जमात जताततै बढ्दो छ ।
अझ उनको कविताको शैली र ऊर्जाले विद्रोहको घनिभुत स्वर दिन चाहनेलाई ज्यादा समात्छ । जातले लिम्बू भएकैले उनको नेपाली भाषामा एउटा सुन्दर संस्कृति जतिखेरै मुस्कुराउँछ । शास्त्रीयताबाट मुक्त उनको भाषा नै अनौठो ढंगले लोभ्याउने किसिमको छ । त्यसमाथि दर्शन, ज्ञान र कविताको ’रेन्ज’ बाट कुनै साहित्यिक पनि अप्रभावित रहनै सक्दैन ।
उनी आफैं पनि नयाँ पुस्तालाई सुन्न, बुझ्न सहर, गाउँघर जताततै पुग्छन् र युवाहरूलाई पुल्पुल्याउने एउटा कुरा भनिदिन्छन् (’तपाईंहरूले नै लेखेको ठीक हो । आईवीले, बल्लभले मैले त विश्वका मान्छेको बारेमा लेख्यौं । तर लेख्नुपर्ने त आफ्नै कुरा, आफ्नै संस्कृतिको कुरा नै रहेछ ( … ।’
उमेरले त अब काइँला दाइ डाँडामाथि मुस्कुराइरहेको घाम नै हो । तर उहाँको शालीनता र विनम्रता अजीवकै छ । म सम्झन्छु २०६७ साल मंसिरको एउटा कुरा । काँल्दाइ एकेडेमीको चान्सलर हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौं गुरुकुलले मलाई एकल कवितावाचनको निम्ति बोलाएको थियो । उहाँलाई अगाडि राखेर कविता सुनाउने आफ्नो कत्रो रहर । फोन गर्यो । दाइ सुन्ने होइन । मैले एउटा मेसेज पठाइदिएँ ( ’काँल्दाइ, आई वान्ट टु सी यु देयर’ भनेर ।
दिल्लीको एउटा कार्यक्रममा दाइले अभि सुवेदी सरलाई मेसेज देखाउँदै भन्नु भएछ( ’यी, मनुले यस्तो चिठी लेख्या छ’ । पछि म गुरुकुल पुग्छु त दाइ त्यहीँ अडेस लागेर उभिरहनु भएको छ । एउटा मेसेजको भरमा नेपाल एकेडेमीको चान्सलर उपस्थित हुनु मलाई अनौठो र गजब लाग्यो । त्यस्तो विनम्रता एउटा ठूलो कवि, ठूलो लेखक, कि त एउटा सन्काहासित मात्रै आस गर्न सकिन्छ ।
युवाहरूको ’डिफेन्स’ पनि उहाँ गजबले गर्नुहुँदो रहेछ । निकै अघि एकपटक इलाम(झापाको संगमतिर एउटा कार्यक्रम थियो । दाइ प्रमुख अतिथि । कार्यक्रम अघि हामी एउटा हलमा थियौं । एकजना नेता रहेछन् । मेरा कविता मन पराउने । ती अचानक बुर्लुक्क उफ्रेर भित्र पसे र भने ’ओहो, मनुजी । ल दुईतीनवटा कविता सुनाउनुहोस। बोर लागिसक्यो’ ।
काँल्दाइ त तुरुन्तै तातीहाल्नु भो’ र कड्किनु भो’ ( ’तिमी नेताहरूलाई हामीले कहिल्यै लौ न बोर लाग्यो, भाषण गरिदेऊ भनेका छौं ? जाओ न पजेँरो चढ, आनन्द लेउ । घर बनाउ । हाम्रो पनि त कुनै दिन सालिक …’ भनेर दाइ अडिनु भो’ र भन्नु भो’, ’तर मोराहरूले सालिक पनि पो भत्काइरा’ छन् … ।’ सबै गललहाँसे । नेता हिँडेपछि दाइ पनि मुस्कुराउनुभयो ।
काँल्दाइ चान्सलर हुँदै पनि एकेडेमीले केही गरेन भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो । दाइ विराटनगर गुरुकुलमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । मैले बोल्दा ठूल्ठूलो स्वरमा साहित्यकारहरूको झोँक पोखिदिएँ । दाइ बडो मजाले टाउको हल्लाई(हल्लाई मुसुक्क हाँसेर मेरो कुरा सुनिरहनुभएको थियो । निकै बेर बोलिसकेपछि म मञ्चमा दाइ छेउ गएर बसेँ । दाइले मतिर अलिकति ढल्किएर विस्तारै भन्नु भो, ’तिमीले बडो मजाले बोलेको देखियो । तर के बोल्यौं ? मैले त ’हियरिङ एड’ (सुन्ने यन्त्र) ल्याउनै भुसुक्कै बिर्सेछु ।’ मैले त हाँस्नु कि रुनु ।
७८ औं जन्मोत्सव मनाइसक्नु भएका एउटा ठूलो कविको आलोचना हुनै हुँदैन भन्नु गलत कुरा हुन्छ । आलोचनाकै माझमा काँल्दाइका कविता उठेका हुन् । व्यक्तित्व उठेको हो । तर कैलेकाहीँ निःकृष्ट भाषामा पनि उहाँको आलोचना गरिएको सुनिन्छ । एउटा युगान्तकारी दर्शन नै दिएका, कविता नै नयाँ दिएका एउटा विराट कविको आलोचना गर्दा एकपटक श्रद्धाले शिर झुकाएर अनि आलोचना गर्दा हुन्छ ।
मूल कुरा श्रद्धा हो कि सन्देह हो भन्ने हो । श्रद्धा हृदयमा राखेर सन्देह गर्दा सन्देह सिर्जनशील हुन्छ । सन्देह हृदयमा राख्दा श्रद्धा बाहिर पर्छ । कुरा यत्ति हो । मानिसको पहिचान उसको सपना बुझेरमात्र हुन्छ भनिन्छ । जीवनभर साहित्य नै सपना भएका काँल्दाइ निःसन्देह यो देशको साहित्यको एक ठूला नायक हुन् । कमसेकम यति चाहिँ नसोची भन्न सकिन्छ । अर्नपुर्ण पोष्टबाट